Kubhadhara - hannari-shopu
Ndeipi yekubhadhara processor hannari inotsigira?
Tine mamwe maitiro ekubhadhara iwe.
Ndokumbira kuti utarise iyo yekubhadhara yakasiyana Sezzle nekudzvanya iyi inotevera link. Kana ino inguva yako yekutanga yekushandisa Sezzle, tinokurudzira kuti utenge pasi pemadhora 500 kuti ubvumidzwe neZezzle.
How sezzle inoshanda
Nei yekutenga kwangu kusiri kubvumidzwa?
Tenga Pay (Shopify Kubhadhara):
Isu tinogamuchira Visa, Mastercard, American Express, uye Alipay kubhadhara kubva kune vatengi pasi rese kuburikidza nebasa rekubhadhara.
Isu hatisati tamboziva yako kiredhiti kadhi nhamba. Shop Pay aka Shopify Kubhadhara kunoita ma process aya zvakachengeteka uye zvisina ngozi. Mune zvimwe zviitiko, tinoshandisa sevhisi sevhisi nekuda kwekudhura kwekuchengetedza chinhu.
Imwe neimwe nzira, kubhadhara kunofanira kuitwa mukati memazuva mana ekuraira kwakagadzirwa.
PayPal inzira yakachengeteka, isinganetsi yekubhadhara uye kubhadhara - kusaina kwemahara
Kana iwe usina chokwadi chekuvhura account, tinogona kukutsigira nekubata maneja weakaunti yePayPal.
Unogona kushandisa kadhi rako rechikwereti kuburikidza nePayPal, uye zvakachengeteka.
Ndokumbira utore usati watumira kubhadhara kune mutengi uye mutengesi kuchengetedzwa.
Kana iwe uine Revolut account, tinogamuchira Revolut.
Inoti iwe unogona kutumira mari pasirese pakare pakarepo, pasina akavanzika FX mubhadharo.
Unogona kushandisa kiredhiti kadhi rako kana Bank kuburikidza Revolut. Dzidza zvimwe
EBANX ndeye Latin American mubhadharo mufambisi.
Kune Brazil, elo uye nezvimwe zvinotsigirwa. ZveMexico, OXXO uye imwe inotsigirwa.
YeArgentina, unogona kushandisa PAGO uye nezvimwe.
tapota ona EBANX mamwe mashoko.
Isu tinogamuchira MoneyGram kana iwe usingakwanise kushandisa chero chipi zvacho pamusoro apa.
Isu tinozotumira chinhu mushure mekunge tagamuchira mubhadharo.
Imwe nzira yekutumira iyo kubhadhara, ndapota inzwa wakasununguka kune kumbira isu.